quful moto z wuxuu ku shaqeyn doonaa t-mobile iyo at & t, laakiin kuma shaqeyn doono verizon iyo sprint
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Quful Moto Z wuxuu ka shaqeyn doonaa T-Mobile iyo AT&T, laakiin ma shaqeyn doono Verizon iyo Sprint
Quful Moto Z wuxuu ka shaqeyn doonaa T-Mobile iyo AT&T, laakiin ma shaqeyn doono Verizon iyo Sprint
Shalay la shaaciyey, Moto Z iyo Moto Z Force waxaa laga heli doonaa Mareykanka sida Verizon-gaar ah taleefannada gacanta ee loo yaqaan Moto Z Droid Edition iyo Moto Z Force Droid Edition. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Sebtember, Motorola wuxuu sidoo kale iibin doonaa Moto Z. quful
Haddii aad & apos; qorsheyneyso inaad iibsato Moto Z-ka qufulka oo aad u isticmaasho Verizon ama Sprint, nasiibkaaga & apos; Taasi waa sababta oo ah, sida laga soo xigtay Droid-life, Motorola waxay xaqiijisay in taleefanka gacantu uu la jaan qaadi doono oo keliya shabakadaha GSM - sida AT&T iyo T-Mobile. Sidaa darteed, taleefanka kuma guuleysan doono aaladda CDMA (Verizon, Sprint, iyo US Cellular ayaa halkan lagu soo daray). Waxaan u maleyneynaa in tani ay wax la leedahay xaqiiqda ah in Verizon uu doonayo inuu si buuxda u xakameeyo noocyada CDMA ee aaladaha cusub ee Moto.
Motorola weli ma shaacin qiimaha Moto Z, in kasta oo ay sheegtay & apos; in taleefanka gacantu uu noqon doono ka raqiisan taleefoonnada casriga ah ee ka socda Apple ama Samsung - oo macnaheedu yahaykari karakharashka ka hooseeya $ 600 la furay.
Ilaa moobilada cusub ee Moto-Lenovo ay suuqa soo galaan, waxaad ka heli kartaa wax badan oo iyaga ku saabsan adiga oo hubiya kuweena Moto Z gacan-ku-hayn , naga Moto Z Force gacan-ku-hayn , iyo kaayaga Moto Z iyo Moto Z Force muuqaallo cusub oo muuqaal ah .
naadiga sam ee jimcaha madoow iphone
ma ii jirtaa 5g
Sprint hadda waxay bixisaa dammaanad lacag celin 30 maalmood ah
Ugu dambeyntii Verizon vs AT&T, T-Mobile iyo Sprint LTE xawaaraha iyo khariidadaha caymiska ayaa muujinaya horumarka waalan ee T-Mobile & apos;
AT & T Samsung Galaxy S6 ugu dambeyntii waxay aragtaa cusbooneysiinta Android Marshmallow
Samsung waxay qireysaa arinta batari-ka Galaxy S4 oo barara, waxay bixisaa bedel bilaash ah
Galaxy S8 iyo S8 + mararka qaarkood waxay ku xusuusinayaan inaad nadiifiso muraayadaha kaamirada si aad uhesho darbo cad
Apple iPhone 6 iyo Sony Xperia Z3 Compact
Dhammaan taleefannada iibsiga ugu fiican & apos; (oo wata qorsheyaal) waxay wataan $ 50 kaar e-hadiyad ah dhammaadka toddobaadkan oo keliya
Samsung Galaxy S6 iyo Galaxy S6 gees: 36 talooyin & tabaha
Waa kuma doppelganger caan ah? Barnaamijkan ayaa kuu sheegi doona in kastoo ay jiraan calan cas